Ugcino lweeTravelaustria | Gcina A Isitimela
ekhaya > travelaustria
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Abahambi nge nezinyo esimnandi, Qwalasela! Kungenzeka ukuba ndicinge ukuba bahambe nge Europe nje ngenxa ngokuzama dessert, kodwa kufanele. IYurophu ezinye okuluncuthu fantastic ukuba uya kukuzisela wena kufutshane inkcubeko ilizwe xa uhlola….
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Akukho ukunqongophala ezinika kakhulu eYurophu. abafuna iadrenaline kunye nabathandi imidlalo eyingozi sinjani kwiindawo ezahlukeneyo yaseYurophu uluhlu olubanzi lwemisebenzi. Ukuba emangele indlela apho ngololiwe, siye wawuzegquma, kakhulu! Nazi phezulu yethu…
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu Ezi nangona bam phezu izitya lobulali elingcono kwendakha kwakumnandi, ngexesha kwami ​​e Austria. Ndilapho ehlotyeni 2016 ngenxa yam internship nyanga-4 kwi-NGO wengingqi amancinci ubungakanani. Amava internship waba mkhulu kangaka, that I got to meet…